Bitcoin Hardforks gịnị ka ọ bụ? - Blockchain News
Gịnị bụ ndụdụ?
The Bitcoin netwọk-arahụ site a otutu ndụdụ kemgbe biakwa obibia nke a cryptocurrency na 2008. Ndị a ndụdụ kwesŽrŽ aka mmepe na-edozi nsogbu ndị dị otú ahụ dị ka scalability, ala ike nke TPS (azụmahịa kwa abụọ), mmachi ngọngọ size, na n'ozuzu ikwado Bitcoin network bufee. Na bitcoin ịbụ onye na-emeghe isi software, ọ bụla onye ọrụ na netwọk nwere ike iṅomi, gbanwee, na ịme ha onwe ha iwu na koodu. N'ihi ya, ọ bụla onye ọrụ nwere ike ike ọhụrụ ogbugba ndu na ígwè na-ahụta ka ndụdụ, ya bụ juu ma ọ bụ hardforks nke netwọk.
Softfork bụ a reversible mgbanwe ke blockchain protocol na adịghị egbochi ọnụ nke a ọhụrụ yinye si ekwurịta okwu na ọnụ nke ochie yinye. The kacha mma softfork atụ bụ Segregated Onyeàmà ma ọ bụ SegWit. Network ọrụ rụọ ọrụ a softfork na August iji ebuli Ọdịdị nke ngọngọ azụmahịa nke mere na ha ga-ogide obere nchekwa ohere. The softfork kwere nkanka jide ozi ọzọ na-enweghị na-agbanwe agbanwe na-arụ ọrụ nke Bitcoin netwọk.
Hardfork bụ a ọhụrụ network yinye na-kpụrụ mgbe ọhụrụ iwu na-emegide ihe ochie blockchain protocol. N'okwu a, na ọnụ nke ọhụrụ na ndị agadi netwọk ga enwe ike “ekwurịta okwu,” ebe hardfork pụtara na-agbanwe agbanwe na otutu mmadu kwenyere usoro onwe ya. Site n'enyemaka nke hardforks, netwọk ndị ọrụ na-agbalị na-edozi isi nsogbu nke Bitcoin netwọk dị ka ala netwọk bandwit na-enye ohere hazie ruo asaa azụmahịa kwa abụọ na mmachi ngọngọ size na, dị ka ọtụtụ, ihe kwesịrị ijide ihe karịa 1 MB nke data. Hardforks-ekwe ka ndị ọrụ na-ike ọhụrụ cryptocurrencies, dị ka uzo ozo ka Bitcoin.
Gara aga hardforks pụta
Bitcoin XT bụ nke mbụ Bitcoin network hardfork, nke e nwere na August nke 2015. The hardfork, nke dabeere ndị isi koodu nke Bitcoin Core, e kwesịrị dịkwuo ngọngọ size ka 8 MB, si otú amụba netwọk bandwit ruo 24 azụmahịa kwa abụọ, ma cryptocurrency emeghị nweta ndị dị mkpa nkwado si na Ngwuputa obodo. Mejuputa Bitcoin XT ọ chọrọ 75% nke niile Bitcoin network miners ịbanye ọhụrụ netwọk, ma naanị 12% nke ha na-akwado ndị hardfork. Na ndabere nke a, otu n'ime ndị isi na mmepe Mike Hearn rere ya cryptocurrencies na hapụrụ oru ngo na 2016. N'ihi ya, naanị 20 ọnụ na-ekpe si mbụ 4,000 nkeji, nke mere na netwọk dịghịzi adị na oge.
Bitcoin Unlimited hardfork na oru ịgbanwe ngọngọ size na May 2016, mgbe miners na-chọrọ ịhọrọ size nke ga-eme n'ọdịnihu na netwọk ngọngọ. Dị ka miners, ịgbasa size nke ngọngọ ga-bụghị naanị iwepụ ihe ndị kwụ n'ahịrị ma mma ha profitability site na ịba ụba nke ngụkọta ọrụ ụgwọ na ngọngọ. Ma hardforks na-akatọ, ndị ọtụtụ n'ime ha na mmepe, kwuru na nke a atụmatụ nwere ike na-amụba na o na nnukwu centralized ọdọ mmiri nke miners ga-amalite iji na-aghọgbu network development.
Nke a pụtara na miners na mmachi ngwaike ike ga-enwe ike isonye irè na mmepe nke netwọk na n'ikpeazụ ga-kpamkpam superseded. N'ihi ya, netwọk ga-aghọ centralized na ọtụtụ ọdọ mmiri. Ndị ọkachamara na-hụrụ ọtụtụ chinchi ke Bitcoin Unlimited software, nke mbụ na April na mgbe ahụ na May nke afọ a mere ka ọdịda nke 70% nke ọnụ na netwọk, si otú ahụ mebie kaadị obodo ntụkwasị obi na ndị a ndụdụ.
Bitcoin Classic oru ngo na oru lebara Bitcoin network scalability nsogbu, nke a na-edozi site na Bitcoin XT hardfork. Ihe mgbaru ọsọ nke oru ngo bụ dịkwuo ngọngọ size ka 2 MB na mgbe ahụ ka 4 MB. Ma nke a hardfork emeghị nweta ndị dị mkpa nkwado nke kaadị obodo. Na mmalite karịa 2,000 ọnụ wee akụkụ ke oru ngo,” ma ọnụ ọgụgụ ama esịn ka 100 site 2017. Na November a mara ọkwa na oru ngo-a mechisịrị ọnụ ala mgbe SegWit2X e kagbuo na mmepe nke oru ngo ama n'ihu ọha na-akwado Bitcoin Cash, ọhụrụ cryptocurrency.
Bitcoin Cash bụ eleghị anya ndị kasị ama na ihe ịga nke ọma Bitcoin network hardfork. N'ihi nke a na-amanye hardfork protocol, Bitcoin Cash pụtara na ngọngọ 478,558 on 1 August. Dị ka akụkụ nke ndụdụ, ngọngọ size elu site 1 MB na 8 MB, na a, n'oge ya, mụbara netwọk ike ma belata azụmahịa ụgwọ. Mgbe hardfork, Bitcoin ịgụ nwere ihe hà ego nke Bitcoin Cash na ha e-wallets. The ọhụrụ network nyere a usoro na-echebe site na concurrent azụmahịa abụọ blockchains. taa, 13 December, na Bitcoin Cash ọnụego mgbanwe bụ $1,616.84 ma ugbu a enịm atọ site cryptomarket capitalization.
Bitcoin Gold cryptocurrency pụtara na 24th nke October ka a n'ihi nke hardfork na ngọngọ 491,407 rụrụ site na Ngwuputa ike Lightning ASIC na Hong Kong. Ihe mgbaru ọsọ nke oru ngo bụ ịghọ a ọzọ mara mma ego maka ndị na-abụghị ọkachamara miners karịa mbụ bitcoin. Na ndabere nke a, a ukwuu ọnụ ọgụgụ nke netwọk ndị ọrụ nwere ike egwupụtakwa Bitcoin Gold na cryptocurrency motto bụ “ka bitcoin decentralized ọzọ.” Kama nke ochie Gosiri-of-Work protocol hardfork initiators eji ọhụrụ otu, Equihash. Nke a algọridim bụ ihe mwute na size nke random ohere nchekwa (RAM) na a na-eji mgbe egwupụta cryptocurrency Zcash. taa, 13 December, Bitcoin Gold ọnụego mgbanwe bụ $276.88 na ahịa capitalization bụ karịa $4.5 ijeri.
Bitcoin Diamond bụ hardfork, nke mere na njedebe nke November na ngọngọ 495,866. Bitcoin Diamond miners ike nkanka na a ọhụrụ algọridim nke ihe àmà nke na-arụ ọrụ (PoW). Ọzọkwa, a cryptocurrency iche na nke mbụ otu site ugboro iri ntọt ke olu nke umu anwuru na ngọngọ size of 8 MB. Developers kwere na a hardfork ezubere iji dozie nsogbu ndị dị ka enweghị nzuzo nchedo, onye na-adịghị azụmahịa nkwenye, na elu na nbata-uzọ nke ọhụrụ sonyere ịbanye netwọk. Ka ịmepụta Bitcoin Diamond Ngwuputa netwọk, e-wallet, ọnụ koodu, na API, nakwa dị ka ịgbakwunye na-emeghe iyi koodu na GitHub na-zubere site na njedebe nke afọ.
Super Bitcoin, a ọhụrụ cryptocurrency, pụtara na 12 December, dị ka n'ihi nke nkewa Bitcoin netwọk na ngọngọ 498,888. The Super Bitcoin motto bụ “ka Bitcoin oké ọzọ.” Ọ bụ ihe kwesịrị ịrịba ama na kama nke omenala ICO a n'elu ikpo okwu na-eji a ọhụrụ usoro nke-adọta investments, akpọ mbụ ndụdụ àjà (IFO). The hardfork-enye ndị unit dịkwuo ruo 8 MB. The netwọk na-eji a technology Lightning Network nke ga-ekwe na-eduzi na-akparaghị ókè ọnụ ọgụgụ nke micropayments. Ọzọkwa, Super Bitcoin netwọk na-agba ọsọ smart contracts. Developers dee, Otú ọ dị, na ndụdụ na-aduak na-aghọta na kaadị obodo ọchịchọ na ọ bụ kama nnwale.
Àmụmà Bitcoin - netwọk nkewa ga presumably eme 23 nke December na ngọngọ 499,999. Mmepe nke ọhụrụ network chọrọ ikpokọta ihe kasị mma àgwà bitcoin na ethereum. N'ihi ya, àmụmà Network technology ga-eji na ọhụrụ na netwọk nke na-arụ micropayments na ọhụrụ DPOS (Àmà nke n'inyefe Eto) usoro ga-etinyere maka otutu mmadu kwenyere. Dịkwuo unit ruo 2 MB, nke ga-amụba azụmahịa ọsọ na ọ na-atụ anya na netwọk ga na-akwado smart contracts. The netwọk ga-enwe ihe na ụba na-agba nke ọhụrụ ngọngọ e kere eke nke a ga-ruo 3 sekọnd. Mgbe hardfork anaghị akwado SegWit, ọ na-enye nchebe pụọ ugboro ugboro azụmahịa. Otú ọ dị, ọ bụ uru na-arịba ama na n'agbanyeghị na-eru nso na igba egbe ụbọchị, ngo nwere ka melite a na-arụ ọrụ website.
Bitcoin Good hardfork, butere site na Chinese cryptocurrency ọṅụ Chandler Gụọ, bụ ime na ngọngọ 501,225, on 25 December. The na-azụ ahịa kwuru na tupu Ngwuputa gaghị eme, mgbe emission olu ga ikere 21 nde CHINEKE. Ọtụtụ ngwaahịa mgbanwe ugbua gosiri na ha ga-arụ ọrụ na ọhụrụ cryptocurrency, nke ga-nkà na Bitcoin ịgụ na a ruru nke onye otu.
Bitcoin Platinum e gosiri dị ka a Bitcoin network hardfork, nke e kwesịrị-eme na ngọngọ 498,577 na ike a ọhụrụ cryptocurrency. Otú ọ dị, ka Cointelegraph akọ, na hardfork bụ a ojoro kere a na-eto eto si South Korea, na ego ya onwe ya bụ a zuru oyiri nke Bitcoin Cash koodu.
Co-nchoputa nke ZenCash, Rob Viglione ekwere na ndụdụ bụ ezigbo nzọụkwụ nke blockchain development:
Open-iyi ecosystems na-iji webata, ma na nke ahụ bụ site na-oru ngo ndozi ma ọ bụ ndụdụ nke dum code isi na-aga na ihe na-emegide direction. Evolution bụ a imetosi usoro, ya mere na ọ bụghị mgbe niile-adịrị, ma mgbe ụfọdụ, nke ahụ bụ nanị ụzọ nwere nnukwu breakthroughs.
Na-eduga na Mmepụta nke blockchain na Sweetbridge, Bob Summerville ekwere na ndụdụ na-ezi n'ihi na ha na-ekwe òtù ikpebi otú netwọk ga ịzụlite:
E nwere afọ nke egwu, ejighị ihe n'aka, ma na obi abụọ n'ime Bitcoin obodo banyere ihe ize ndụ nke ike ndụdụ. O doro anya na m na ọtụtụ n'ime na mkpọtụ e-abịa site iche iche na amara mmanye na nnyocha n'elu free ahịa na ikike secede.
E nweghị ihe dị ka ihe a 'ọjọọ ndụdụ.' Ị na-adịghị na bụ'abụ otu ìgwè ma ọ bụ ndị ọzọ. Experimentation na mpi-ezi. Ka ahịa ikpebi na-ekere òkè ebe ị na-ahụ uru.
My kasị baa uru mmụta ahụmahụ si ETH / wdg gbawara n'etiti bụ na nta ígwè na-viable. Ọ bụrụ na a kaadị obodo nwere irreconcilable iche, mgbe ị nwere ike ịga gị iche iche ụzọ, na nke ahụ bụ nnọọ mma. Ị na-agba alụkwaghịm, nakwa ma gị gawa ndụ, kama biri na nhụsianya ruo mgbe ebighị ebi, mgbe niile na-arụ ụka. "
Ma Director nke LOOMIA, Saul Lederer nwere a kpam kpam na-abụghị echiche:
"Bụ ide ahịa na nsụgharị dị iche iche nke Bitcoin bụ mgbagwoju anya ka ndị ọrụ na discredits ndị na-azọrọ na e nwere a ole na ole nke Bitcoins-ebe ị nwere ike mgbe niile ndụdụ ya na okpukpu abụọ na ọkọnọ,"Ka akwụkwọ Lederer. "Gịnị bụ ihe nke ukwuu na-eweta nsogbu bụ na ndị a atụ ogho-offs sprung si a dịtụ obere squabble na Bitcoin obodo na otú e si edozi ngọngọ size ịgba. Kama-abịa na nkwekọrịta, obodo, mmepe, na koodu na-agbajikwara n'ime dị iche iche iche iche. "
The fintech ogwe-aka nke G ...